‘वडाध्यक्षको कार्यभार पाएपछि बल्ल जनप्रतिनिधि हुँ जस्तो लाग्यो’ –पार्वती भूल
पार्वती भूल बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिका वडा नम्बर ४ की दलित महिला वडा सदस्य पदमा निर्वाचित भएकी हुन् । निर्वाचित भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि खासै केही गर्न नपाएको भनेर उनलाई सँधै चिन्ता लाग्थ्यो । तर जब उनले कार्यवाहक वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाइन्, त्यसपछि उनीमा हर्षको सीमा छैन । टेलिफोन सम्पर्क गरेर उनले सुनाइन्, ‘म्याम मैले दुई दिन कार्यवाहक पाएँ ।’ त्यो दुई दिनमा कस्तो अनुभव भयो त भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘बल्ल चुनाव जितेर आएको जनप्रतिनिधि भन्ने महसुस भयो, नागरिकता बनाउनेका लागि सिफारिस गरें । आफ्नो नाम र हस्ताक्षर अब सिडिओ कार्यालयसम्म पुग्छ । नाता प्रमाणित पनि गरें’ कति खुशी लाग्दो रहेछ फेरि दोहो¥याइन् ।
कार्यालयमा भएका कर्मचारीदेखि सेवाग्राहीसम्मलाई दुई दिनसम्म खाजा चिया पनि खुवाएको बताउँदै उनले भनिन्, कहिल्यै केही खान पाईंदैनथ्यो, कतिपयले तपाईं वडाध्यक्ष भएको भए चिया, खाजा पनि खुवाउन हुने रहेछ पनि भने । कहिलेकाहीं त हो यस्तो मौका भनेर आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा चिया नास्ता खुवाएको महिलान्यूजसँग बताइन् ।
त्यसो त यो जिम्मेवारी पनि सजिलै पाएकी होइनन् न त आलोपालोमा नै दिए ? जब उनी बोल्न थालिन्, सञ्चारमाध्यमसँग बोल्न थालें, चुनाव जितेको दुई वर्ष खेर गयो भन्ने दुःखद अनुभव उनले बोल्ने मौका पाएका ठाउँहरुमा सुनाउँथिन् । त्यही मेरो कुरा सबैतिर पुग्यो होला अनि जिम्मेवारी पाएँ भन्ने लागेको छ उनलाई । आफू जस्ता अरुलाई पनि उनी सुझाव दिन्छिन्, ‘बोलेपछि पाईंदो रहेछ, बोल्न थाल्नुस् ।’
अधिकारकर्मी हुन् पहिला
सुदुरपश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लाको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर ४ नगरपालिका बैतडी जिल्लाको सदरमुकाम रहेको नगरपालिका रहेको वडा हो यो । पार्वती दलित महिला सदस्य पदमा निर्वाचित भएकी हुन् । प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भएको बताउने उनी वडा सदस्य हुनुभन्दा अघिदेखि दलित महिला संघ (फेडो) को जिल्ला उपाध्यक्ष पदमा रहेकी थिइन् ।
जागिरको रुपमा हलिया मुक्तिका लागि एक पैरवी परियोजनामा पनि काम गर्थिन् । राजनीतिभन्दा पूर्णत बाहिर रहेकी उनलाई लक्षित समुदायका लागि कसरी के काम गर्ने भन्नेमा जानकार छिन् । उनलाई तत्कालीन नेकपा एमालेले वडा सदस्यको उम्मेदवार बनाएको हो र जितिन् पनि ।
दलित महिला सदस्य : ‘पद छ, अधिकार छैन’
पहिलेदेखि नै दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले उनका कुरा धेरैले मान्थे । सदरमुकाम नै कार्यक्षेत्र भएकाले नेतादेखि प्रशासकहरु प्रायः सबै चिन्थिन् र उनलाई पनि चिन्थे । तर वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि भने विभेदको शुरुवात भएको अनुभव भयो उनलाई । दलित र महिलाको लागि भनेर केही काम गर्न भनेर योजना लग्यो भने जनप्रतिनिधि भएर दलित र महिलाको मात्रै काम गरेर हुन्छ ? विकासको काम गर्नुपर्छ भन्छन् ।
विकासका योजना, कार्यक्रमबारे सोध्दा किन चाहियो भन्छन् वडाध्यक्षले । पहिले उनीहरुले गरेको निर्णयमा सही गर्न मात्र लगाउँथे, कराउँदा कराउँदा बैठकमा बोल्ने पालो दिन थालेका छन् । उनी थप्छिन्, ‘बोले पनि हाम्रा कुरा कहिल्यै निर्णय गर्दैनन् । बैठक बसेको दिन त टेन्सन मात्रै हुन्छ, छलफल हुन्छ, आफूले पनि बोल्यो तर आफूले बोलेको केही पनि निर्णय हुँदैन । वडाले छुट्टयाएको बजेटबाट गरिने कामहरुको उद्घाटन, समापनमा अरु सबै जान्छन्, मलाई जानकारी नै दिंदैनन् ।’ धार्मिक कार्यक्रमहरु छ भने अरु ४ जना जनप्रतिनिधि जान्छन्, मलाई जानकारी नै हुँदैन । त्यो ‘दलित’ भएकै कारण हो भन्ने उनको ठम्याइ छ ।
‘लक्षित वर्ग बजेटले विकास निर्माण’
उनले केही समय अघि दलित बस्तीमा खानेपानीको लागि बजेट छुट्टयाउनु पर्ने माग गरिन् । त्यसका लागि लक्षित वर्गको बजेटबाटै हाल्ने कुरा भनियो । तर पार्वतीले लक्षित वर्गको बजेट यस्तोमा हाल्ने होइन, यहाँ पूर्वाधार बजेटबाटै छुट्याउन धेरै माग गरिन् । लक्षित वर्ग बजेट र पूवार्धार विकास बजेट भन्ने फरक हो भनेर धेरै बुझाउन कोसिस गरिरहेकी हुन्छिन् तर नबुझेको वा बुझेर पनि नबुझे जस्तो गरेको हो ? अचम्मित भएको बताउँछिन् ।
दलित बस्तीमा एउटा सामुहिक भवन बनाए पनि लक्षित वर्ग बजेट छुट्याउन भन्छन् । कतिपय योजनामा उनी र महिला सदस्यको मत मिल्छ तर ३ जना पुरुषहरुको बहुमत भएर निर्णय गर्छन्, बाध्य भएर हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । जिल्ला सदरमुकाम भएको वडामा त यो अवस्था छ, अरु ठाउँको के होला ? उनको प्रश्न छ ।